၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ကုန်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံး Forex အပိုဆု ၁၀ ခု rosPros & Conss Uncovered
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 1 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2021
အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးနေရာတွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသော Forex ပွဲစားများဖြင့်တက်ကြွစွာဖြင့်အကောင်းဆုံး Forex ဆုကြေးကိုရှာပါ။ စက်မှုလုပ်ငန်းသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအလွန်အမင်းအလွန်အမင်းများလွန်းလာသည်။ ၎င်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်ပလက်ဖောင်းများအား ပို၍ ယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်လာစေရန်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခဲ့သည်။ ဒီ၏ရှေ့တန်းမှမှာ Forex အပိုဆုများပူဇော်သက္ကာဘို့။
အတိုချုပ်ပြောရရင် forex ပွဲစားတွေကတော့ account ဖွင့်မယ့်သူတွေကို sign-up bonus ပေးမယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်လိုက်ဖက်သည့်အပ်ငွေအပိုဆုကြေးအဖြစ်ရရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ကန ဦး အပ်ငွေကိုအချို့သောရာခိုင်နှုန်းဖြင့်တိုးမြှင့်လိမ့်မည်။ အခြားကိစ္စရပ်များတွင်ငွေသွင်းရန်မလိုပါ။
အကယ်၍ သင်သည် Forex အပိုဆုကြေးများ၊ သူတို့မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ တောင်းဆိုရန်သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသိလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ပါ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ကုန်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံး Forex ဆု ၁၀ ခု.
မွတ္စု: Forex အပိုဆုကြေးများသည်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာငွေသားအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ အပိုဆုကြေးသည်ငွေပေးချေမှုမပြုလုပ်မီသင်တွေ့ဆုံရမည့်အနည်းဆုံးကုန်သွယ်မှုပမာဏနှင့်အမြဲတမ်းရရှိလိမ့်မည်။
ယင်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံတွင် Forex ဆုကြေးငွေသည်ပွဲစားများကသင့်အားသူတို့၏ပလက်ဖောင်းသို့သွေးဆောင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ကမ်းလှမ်းသောအရောင်းမြှင့်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်အပိုဆုကြေးသည်သင်၏ပလက်ဖောင်းဖြင့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်မလိုသေးသောသူများအတွက်သာရရှိနိုင်ပါသည်။ ဘောနပ်စ်သည်ပွဲစားငွေကိုရေတိုအတွက်ကုန်ကျနိုင်သော်လည်းသင်ပလက်ဖောင်းတွင်ရေရှည်ဆက်လက်တည်ရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, Forex ဆုကြေးငွေပို။ ပို။ ရက်ရောလာပြီနေကြသည် အွန်လိုင်းကုန်သွယ် အာကာသ။ အခြေခံသဘောတရားအရ Forex ဆုကြေးငွေများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့်ရရှိသည် သိုက်ဆုကြေးငွေ နှင့်တစ်ဦး အဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေ။ ယခင်ငွေပမာဏနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးငွေသွင်းငွေပမာဏကိုငွေပမာဏအထိရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုနှင့်လိုက်ဖက်လိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်ပွဲစားသည်ဖောက်သည်အသစ်များကို ၁၀၀% ကိုက်ညီသောအပိုဆုကြေးကို£ 100 အထိပေးလိမ့်မည်။ ငွေသွင်းပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ပွဲစားသည်သင်၏အကောင့်ကိုသက်ဆိုင်ရာအပိုဆုငွေပမာဏနှင့်အကြွေးတင်လိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေအပိုဆုမှကြွလာသောအခါ, ဒီနာမကိုအမှီအကြံပြုသည်နည်းတူအလုပ်လုပ် - သင်သိုက်လုပ်စရာမလိုဘဲသင်အပိုဆုရလိမ့်မည်။
အသေးစိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်လေ့လာသွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ငွေကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းမပြုမီသင်သတိထားရမည့်လိုအပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအမျိုးမျိုးနှင့် Forex Bonus များသည်အမြဲတမ်းရရှိလိမ့်မည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ၊ အစစ်အမှန်ကမ္ဘာငွေသားအတွက်အပိုဆုရန်ပုံငွေများကိုမထုတ်ယူမီသင်သည်ငွေပမာဏကိုကုန်သွယ်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်အပ်နှံထားသည့်ငွေများထက်သင်ပိုမိုရောင်း ၀ ယ်ပါ
Forex Bonus ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။
ဒါကြောင့်ယခုသင် forex ဆုကြေးဆိုတာဘာလဲသိပြီဆိုလျှင်လက်တွေ့တွင်ဥပမာအရာတစ်ခုသည်အပိုဆုကြေးမည်သို့အလုပ်လုပ်မည်ကိုလေ့လာကြည့်ကြစို့။
ငွေသွင်းခြင်းအပိုဆုသည်အွန်လိုင်းမှလူကြိုက်အများဆုံးအပိုဆုကြေးအမျိုးအစားဖြစ်သည် Forex ပွဲစားများ။ အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့အတိုချုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပွဲစားသည်သင်၏သိုက်ကိုသတ်မှတ်ထားသောရာခိုင်နှုန်းနှင့်လိုက်ဖက်လိမ့်မည်။ အပိုဆုကြေးမှာအများဆုံးငွေပမာဏပါလိမ့်မည်။
သင်တစ် ဦး Forex ပွဲစားနှင့်အတူ 100% ကိုက်ညီသိုက်ဆုကြေးငွေတောင်းဆိုပါ
Forex ပွဲစားသည်ပေါင် ၁၀၀၀ အထိအပိုဆုကြေးခွင့်ပြုသည်
သင်၏ငွေသွင်းပြီးသည့်နောက်ပွဲစားသည်သင်၏အကောင့်ကိုပေါင် ၁၀၀၀ ထပ်မံချီးမြှင့်သည်
သင်၏စတင်လက်ကျန်ငွေသည်ပေါင် ၂,၀၀၀ ဖြစ်သည် - သင်သည်သင်၏အကောင့်ကို£ 2,000 ဖြင့်သာထောက်ပံ့နိုင်သော်လည်း
နာမည်ကဖော်ပြသည့်အတိုင်းငွေသွင်းရန်မလိုအပ်ဘဲအပိုဆုကြေးတစ်စုံတစ်ရာမှသင့်အားအပိုဆုကြေးပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ဤအပိုဆုကြေးများကိုအလွန်အမင်းရှာဖွေသည် - အနည်းဆုံးအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကုန်သည်သည်မည်သည့်ရန်ပုံငွေမှမစွန့်ဘဲအပိုဆုကိုရနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြောကြားခြင်းအားဖြင့်လိုက်ဖက်သောအပိုဆုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိုက်အပိုဆုကြေးများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်များစွာသေးငယ်ခြင်းမရှိချေ။
သငျသညျ£ 20 ကိုအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေဗြိတိန်ပွဲစားနှင့်အတူတောင်းဆို
သင်၏ ID ကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်၊ Forex ကုန်သွယ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်သင်၏အကောင့်ကို£ 20 မအပ်ငွေအပိုဆုဖြင့်အကြွေးတင်လိမ့်မည်
အထက်ပါဥပမာများသည်အကျိုးအမြတ်များသော Forex အပိုဆုငွေများမည်မျှရှိသည်ကိုပြသနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အပိုဆုရန်ပုံငွေရရှိပြီးနောက်ငွေထုတ်ယူခြင်းကိစ္စသာမဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ပွဲစားများပုံမှန်ပြုလုပ်သောစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုသင်သတိပြုမိရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏ Forex ဆုကြေးငွေကိုပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်းအတွက်အကြီးမားဆုံးသောအရာမှာကုန်သွယ်မှုနိမ့်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်£ 500 ကိုသွင်းပြီးသင်£ 250 အပိုဆုကြေးရပြီဆိုပါစို့ - သင်၏လက်ကျန်ငွေကို£ 750 သို့ယူဆောင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပေါင် ၇၅၀ ကို Forex ပွဲစားမှချက်ချင်းထုတ်ပြီးသင်၏ဘဏ်အကောင့်သို့ထုတ်ယူနိုင်ပါက၎င်းသည်စင်မြင့်အတွက်အလွန်ကောင်းသောစီးပွားရေးပုံစံမဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, platform သည်ကုန်သွယ်ရန်ဆုကြေးရန်ပုံငွေများကိုအသုံးပြုလိုသည်။
ထို့ကြောင့်အချို့သောအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီသည်အထိသင်၏အပိုဆုကြေးသည်ထိရောက်စွာအေးခဲသွားသည်။ များသောအားဖြင့်သင်သည်သတ်မှတ်ထားသောကုန်သွယ်မှုပမာဏနှင့်တွေ့သောအခါသင်၏လက်ကျန်ငွေအချို့ကိုထုတ်ယူနိုင်သောငွေအဖြစ်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပွဲစားသည်သင်ရောင်းသောပေါင် ၁၀,၀၀၀ တိုင်းကိုသင်၏အပိုဆုကြေးမှ£ 1 ကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
မင်းမှာ£ 250 ဆုကြေးငွေရှိတယ်
ပွဲစားသည်ပေါင် ၁၀၀၀၀ တိုင်းကိုပေါင် ၁ ဒေါ်လာထုတ်သည်
£ 10,000 x ကို£ 250 = £ 2.5 သန်း
ထို့ကြောင့်ပေါင် ၂၅၀ ကိုအပြည့်အ ၀ လွှတ်ပေးရန်စုစုပေါင်းပေါင် ၂.၅ သန်းကိုကုန်သွယ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
တစ်ဘက်တွင်အနည်းဆုံးပေါင် ၂.၅ သန်းကုန်သွယ်မှုပမာဏသည်နက္ခတ္တဗေဒနှင့်မတူပါ။ အထူးသဖြင့်အပိုဆုကြေးသည်ပေါင် ၂၅၀ ဖြစ်သည်ဟုသင်စဉ်းစားသောအခါ။ ဒီလိုပြောခြင်းဖြင့်သင်သည်သင်၏ဆုကြေးရမှတ်များပြည့်မီရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုရှိနေလိမ့်မည်။
ပါ ၀ င်ပါ တစ်ရက်ကုန်သွယ် တစ်နေ့လျှင်ကုန်သွယ်မှုများစွာနေရာချသည်
အထက်ဖော်ပြပါဝေါဟာရများသည်မလွယ်ကူပါက Forex Bonus များနှင့်အတူပေါ်ပေါက်လာသောအချိန်အကန့်အသတ်များကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ဤသည်မှာဘောနပ်စ်ငွေထုတ်ပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုစိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေရန်ပလက်ဖောင်းများအသုံးပြုသည့်နောက်ထပ်နည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်ပွဲစားများသည်သင့်အားပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းမပြုမီအပိုဆုကြေးကိုအသုံးပြုရန်ရက် ၃၀ ပေးလိမ့်မည်။
ဆိုလိုသည်မှာသက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်သင်၏အကောင့်၌ကျန်ရှိနေသေးသောအပိုဆုကြေးများကိုပယ်ဖျက်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ Forex bonus သည်ရက် ၃၀ ထက်နည်းသောအချိန်ကန့်သတ်ချက်ရှိပါက၎င်းကိုသင်ရှောင်ရှားသင့်သည်။
ig အရည်အချင်းပြည့်မှီသော Pair များ
အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင် Forex အပိုဆုကြေးသည်အချို့သောငွေကြေးအတွဲများအပေါ်ကန့်သတ်ချက်များရှိနိုင်သည်။ သင်၏အပိုဆုကြေးရန်ပုံငွေများကိုအသုံးပြုရန်လူကြီးများနှင့်အရွယ်မရောက်သေးသူများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကောင်းမွန်သော်လည်း၊ ထို့ကြောင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော forex အတွဲကိုခွင့်ပြုရန်စည်းကမ်းချက်များကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
အချို့သော Forex ပွဲစားများသည်အချို့သောလူမျိုးစုများကိုသာအပိုဆုကြေးများပေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင့်နေထိုင်ရာနိုင်ငံနှင့်လိုက်ဖက်သောဒိုမိန်းကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုသင့်သည်။ ပွဲစားများသည်မတူညီသောဒေသများအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာရှိသည်။
Forex အပိုဆုကြေးအများစုသည်အနည်းဆုံးအပ်ငွေပမာဏပါလိမ့်မည်။ ပရိုမိုးရှင်းများသည်များသောအားဖြင့်ခွင့်ပြုထားသောအများဆုံးအပိုဆုကြေးပမာဏကိုသာဖော်ပြလေ့ရှိသောကြောင့်၎င်းကိုရှာရန်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံး Forex အပိုဆုကြေး - Ultimate List
ဒါကြောင့်ယခုသင်၌သင်၏အပိုဆုကြေးအမဲလိုက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်လိုအပ်သောဗဟုသုတများဖြင့်လက်နက်ကိုင်ဆောင်လာပြီဆိုလျှင် ၂၀၂၀ ၏ထိပ်ဆုံး ၁၀ ဆုကြေးကိုစာရင်းပြုစုတော့မည်ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက် - UK forex ပွဲစားများသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ရှိနေသည် - အပိုဆုကြေးများကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်မကြာခဏပြလေ့ရှိသည်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဘောနပ်စ်ပမာဏသည်ပေါင်စတာလင် (ဒေါ်လာ ၁၀၀ = ပေါင် ၁၀၀) တွင်အတူတူဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်ပွဲစားက GBP နှင့်ညီမျှသည် ($ 100 = £ 100) ကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။
၁။ Moneta စျေးကွက်အပ်ငွေအပိုဆု
သင်၏အပ်ငွေကို ၅၀% အပိုဖြင့်တိုးလိုပါသလား။ သင်၏ Moneta Markets ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုဒေါ်လာ ၅၀၀ နှင့်အထက်ဖွင့်လျှင်၊ သင့်အား ၅၀% ဆုကြေးပေးမည်။ သင်သည်လက်ရှိ Moneta Markets အကောင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်စေ၊ client အသစ်ဖြစ်စေဖြစ်စေယနေ့သင်၏အပိုဆုကြေးကိုတောင်းခံရန်အောက်ဖော်ပြပါပုံစံကို အသုံးပြု၍ ငွေသွင်းပါ။
အနည်းဆုံးအပ်ငွေသည် $ 250 ဖြစ်သည်
Moneta စျေးကွက်များသို့ ဝင်ရောက်၍ ကုန်သွယ်မှုစတင်ပါ။
၃။ Markets.com - ပေါင် ၂၅ ဖြင့်ငွေချေးရန် Forex Bonus မရှိပါ
Markets.com သည်ယူကေ Forex တွင်အဓိကကစားသူဖြစ်သည်။ ငွေကြေးအတွဲများစွာသည်ဗိုလ်ကြီးများ၊ အရွယ်မရောက်သေးသူများနှင့်ထူးခြားသောအထင်ကရနေရာများသို့ခွဲထွက်သွားသောအခါ၎င်း၏ကုန်သွယ်မှုနယ်ပယ်သည်အလွန်အမင်းကျယ်ပြန့်သည်။ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရုံအတွက်ပေါင် ၂၅ ဒေါ်လာမသွင်းရ။ အပိုဆုကြေးသည်သုံးစွဲသူအသစ်များအတွက်သာဖြစ်ပြီး၊ စိုးရိမ်ရန်အချိန်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
£ 25 အဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေ
4. Plus-500 - ပေါင် ၂၀ အတိုးငွေမပေးဆောင်ရသေးပါ
Major UK ပွဲစား Plus 500 သည်လည်းအပ်ငွေအပိုဆုကြေးနေရာမပေးနိုင်ပါ။ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည်£ 20 အပိုဆုကြေးအပ်နှံခြင်းမလိုအပ်ပါ။ ပလက်ဖောင်းကိုယ်တိုင်သည်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုနယ်ပယ်ရှိယုံကြည်စိတ်ချရသော Forex နှင့် CFD ပွဲစားများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Plus 500 သည်များစွာသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလိုင်စင်ရရှိထားပြီး၎င်း၏မိခင်ကုမ္ပဏီအားလန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းပြုသည်။
£ 20 အဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေ
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖောက်သည်များသာရရှိနိုင်ပါသည်
၅။ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့်ပွဲစားများ - ဒေါ်လာ ၂၀၀ ရည်ညွှန်း Forex Bonus
သင့်တွင်မိသားစုသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများရှိပါကအွန်လိုင်း Forex အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားမှုရှိပါက Interactive Brokers ရည်ညွှန်းအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားပါ။ ဖောက်သည်အသစ်တိုင်းအတွက်သင်အကောင့်ဖွင့်လျှင်၊ ဒေါ်လာ ၂၀၀ ရလိမ့်မည်။
$ 200 လွှဲပြောင်းဆုကြေး
၇။ CMC Markets များ - ၂ ဒေါ်လာမှ ၂ ဝဝ Forex Welcome Bonus များ
UK ပွဲစား CMC Markets သည်ယခုတွင်နှစ်ကြိမ် - နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောဒေါ်လာ ၂၀၀ ဆုကြေးငွေကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ပထမဆုံးဒေါ်လာ ၂၀၀ ကိုသွင်းပြီးသည်နှင့်ပွဲစားသည်၎င်းကိုထပ်ဆောင်းဒေါ်လာ ၂၀၀ နှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည် - သင်၏စတင်လက်ကျန်ငွေကိုဒေါ်လာ ၄၀၀ ဖြင့်ယူပါလိမ့်မည်။ သင်အပိုဆုရန်ပုံငွေများကိုထုတ်ယူနိုင်ရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၁ သန်းတန်ငွေလဲလှယ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ တစ်ကြိမ်ကုန်သွယ်မှုဒေါ်လာ ၂ သန်းတန်ပြီးသည်နှင့် CMC Markets သည်သင့်အားနောက်ထပ်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ထပ်မံပေးလိမ့်မည်။
နှစ်ကြိမ် $ 200 ကြိုဆိုဆုကြေးငွေ-
$ 200 ၏ပထမဆုံးအပ်ငွေသည်တူတူနှင့်တူသည်
$ 1 milion ကုန်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက် hit အခါဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေများကိုထုတ်ယူပါ
၈။ HYCM - ၁၀% အပ်ငွေအပိုဆုကြေးဒေါ်လာ ၅၀၀၀ အထိ
HYCM သည်လူကြိုက်များသော onilne အရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူအသစ်အားလုံးကို ၁၀% အပ်ငွေအပိုဆုကိုပေးသည်။ အပိုဆုကြေးပမာဏကို $ 10 အထိသတ်မှတ်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အများဆုံးရရှိရန် $ 5,000 ကိုထည့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ပွဲစားထဲမှဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ရရှိရန်အတွက်အမြတ်အစွန်း ၃၀ ကိုကုန်သွယ်ရန်သင်လိုအပ်လိမ့်မည်။
အပိုဆုကြေးပမာဏအပြည့်ရရန် $ ၅၀၀၀၀ အပ်နှံပါ
အပိုဆုကြေးဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကိုပြန်လည်ထုတ်ယူရန်အတွက်စံသတ်မှတ်ချက် ၃၀ ကိုကုန်သွယ်မှု ၃၀ ပြုလုပ်ပါ
၉။ Tickmill - ဒေါ်လာ ၃၀ Sign-Up Forex အပိုဆုကြေး
Global Forex ပွဲစား Tickmill သည်ဖောက်သည်အသစ်များအတွက်အပိုဆုကြေးဒေါ်လာ (၃၀) မပေးတော့ပါ။ အပိုဆုကြေးအလွဲသုံးစားမှုကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ရန်ပုံငွေများကိုမထည့်သွင်းမှီသင်၏အကောင့်ကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ သတင်းကောင်းမှာ Tickmill သည်သင်၏ဒေါ်လာ ၃၀ ကြိုဆိုသောကမ်းလှမ်းမှုမှရရှိသောမည်သည့်အမြတ်ကိုမဆိုရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
$ 30 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
၁၀၀% စွန့်စားမှု - အခမဲ့ - အပ်ငွေမလိုအပ်ပါ
၁၀။ TemplerFX - ဒေါ်လာ ၃၀ အပ်ငွေအပိုဆုကြေး
Tickmill နှင့်ဆင်တူသည်မှာ TemplerFX သည်ဒေါ်လာ ၃၀ မသွင်းသောအပိုဆုကြေးကိုလည်းကမ်းလှမ်းသည်။ အပိုဆုကြေးရရန်သင်အားလုံးပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီးသင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ အပိုဆုကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအမြတ်များကိုပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ရန်အတွက်အနည်းဆုံးစံသတ်မှတ်ချက် ၅ ခုကိုသင်ရောင်းရန်လိုအပ်သည်။
အပိုဆုကြေးမရယူမှီ KYC လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုလွန်သွားပါပြီ
ငါတို့လမ်းညွှန်ကိုလမ်းတစ်လျှောက်လုံးဖတ်ပြီးပြီဆိုရင်၊ သင်ဟာ Forex ဆုကြေးဆိုတာဘာလဲ၊ သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်ကောင်းကောင်းနားလည်ထားသင့်သည်။ ပွဲစားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်လိုက်ဖက်သည့်အပ်ငွေသို့မဟုတ်အပိုဆုကြေးကိုမပေးကြောင်းသင်သိလိမ့်မည်။ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုသင်အပိုဆု၏စည်းကမ်းချက်များကိုအပြည့်အဝသတိပြုမိရန်သင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အရေးကြီးဆုံးမှာ၊ ဤသည်သည်သင်ငွေထုတ်ယူခြင်းမပြုမီသင်ကုန်သွယ်ရန်လိုအပ်သောပမာဏကိုအဓိကထားသည်။ များသောအားဖြင့် Forex ဆုကြေးကိုငွေသားထုတ်ယူခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်ပွဲစားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ တန်အပိုဆုကြေးငွေအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ထုတ်ပေးရန်အတွက်သင့်အားငွေကြေးလဲလှယ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည်ဤကိန်းဂဏန်းများကိုဂဏန်းသုံးလုံးအပိုဆုဖြင့်မြှောက်သောအခါသင်သည်ပေါင်သန်းပေါင်းများစွာသောအကြမ်းဖက်မှု၌လျင်မြန်စွာရောက်ရှိနေသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ငွေရှာရန်အတွက် Forex အပိုဆုကြေးတောင်းခံခြင်းသည်အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။ ၎င်းအစား၊ အပိုဆုကြေးများကိုသင်၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်ကိုလေ့ကျင့်ရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ငွေမသွင်းနိုင်သော Forex Bonus ဆိုတာဘာလဲ။
နာမည်ကဖော်ပြသည်အတိုင်း၊ ငွေသွင်းရန်မလိုပါ။ Forex အပိုဆုကြေးသည်သင့်အားမည်သည့်ရန်ပုံငွေကိုမသွင်းဘဲအပိုဆုတောင်းခံရန်ခွင့်ပြုသည် အပိုဆုရရန်အတွက်သင်၏အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုစစ်ဆေးရန်သာလိုအပ်သည်။
လိုက်ဖက်တဲ့သိုက် Forex ဆုကြေးဆိုတာဘာလဲ။
ငွေသွင်းရန်မလိုပါ၊ ကိုက်ညီသောအပိုဆုကြေးသည်သင်ငွေသွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ဘောနပ်စ်ပမာဏသည်သင်အပ်နှံသည့်ပမာဏ၏ရာခိုင်နှုန်းပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၁၀၀% ကိုက်ညီသောအပိုဆုကြေး£ 100 သည်သင်£ 200 ကိုသာအပ်နှံထားသော်လည်းသင့်အားစတင်ကြေးငွေ£ 400 ကိုပေးလိမ့်မည်။
စည်းကမ်းချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များအရအနည်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ပြည့်မီသည်အထိသင်၏ forex bonus ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ပျမ်းမျှအားဖြင့်သင်ရောင်းဝယ်သောဒေါ်လာတစ်သောင်းလျှင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ လှူဒါန်းသည်။
သင်တစ် ဦး Forex အနေအထားဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်အခါတိုင်း, ကုန်သွယ်မှု၏အရွယ်အစားသင့်ရဲ့ပစ်မှတ်ကနေလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်အတွဲစုံကိုဝယ်ပြီးရောင်းသည့်အခါကုန်သွယ်မှုအရွယ်အစားမှာပေါင် ၅၀၀၀ ဖြစ်ပါကသင်အနည်းဆုံးကုန်သွယ်မှုလိုအပ်ချက်မှပေါင် ၁၀,၀၀၀ ကိုဖြတ်ပစ်လိမ့်မည်။
တစ်ချက်အနေဖြင့်၊ လက်ဝယ်ထားရှိခြင်းသည်သင်၏ Forex ကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီးသင်၏ဆုကြေးသတ်မှတ်ချက်လိုအပ်ချက်မှသင်ရှင်းလင်းနိုင်သည့်ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ပေးလိမ့်မည်။ သို့သော် Forex အပိုဆုကြေးကိုရယူရန်အတွက်ဘယ်သောအခါမျှအသုံးမပြုသင့်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ Forex အပိုဆုကြေးကိုငွေကြေးစုံတွဲတစ်တွဲတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
များသောအားဖြင့်၊ Forex ပွဲစားများသည်မည်သည့်ငွေကြေးအတွဲတွင်မဆိုသင်၏ဘောနပ်စ်ငွေကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။ သို့သော်အချို့ပွဲစားများကသင့်အားဗိုလ်ကြီးများနှင့်အရွယ်မရောက်သေးသူများသာကန့်သတ်ထားနိုင်သည်။